निःसन्तानका लागि टेस्टट्युब बेबी बरदान : शुक्रकिटको मूल्य २ हजार | Ratopati
निःसन्तानका लागि टेस्टट्युब बेबी बरदान : शुक्रकिटको मूल्य २ हजार
personतेजेन्द्र के.सी. exploreरुपन्देही access_timeअसोज २१, २०७५ chat_bubble_outline0
बुटवल । नेपालमा टेस्टट्युब बेबीको सुरुवात भएको १५ वर्षभन्दा बढी भएको छ । विसं २०६० बाट सुरु भएको यो प्रविधिको प्रयोग निसन्तानहरूका लागि बरदान बनेको छ । यो सेवा ओम अस्पतालले सुरु गरेपछि अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगिसकेको छ । प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलको लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा २०७३ सालदेखि टेस्टट्युब बेबीको उत्पदानको सुरुवात भइसकेको छ । बुटवलमा यसको सुरुवात स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. प्रदीपकुमार श्रीवास्तले गरेका हुन् । उनै श्रीवास्तसँग टेस्टट्युब बेबी सेवा लिनसक्ने दम्पती, त्यसको विश्वानीयता र खर्च लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।
कस्ता दम्पतीले टेस्टट्युब बेबीको सेवा लिन सक्छन् ?
टेस्टट्युब बेबी निःसन्तान दम्पतीका लागि सन्तान प्राप्तिको राम्रो विकल्प बनिरहेको छ । टेस्टट्युब बेबीकै कारण कैयौँ दम्पतीले सन्तान सुख पाइसकेका छन् । विभिन्न चिकित्सकमा पुगेपछि अन्त्यमा हामीकहाँ नै आउने हुन् । उनीहरूलाई हामीले सुरुमा रिलेसन, सामान्य शारीरक अवस्था आदि परीक्षण गर्छौं । अन्य विधिबाट सन्तान उत्पदान गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि टेस्टट्युबको प्रक्रिया जान सल्लाह दिने हो । यसमा पनि दुई विधि छन्– आईभी एफ र आईसीएसआई रहेका छन् । टेस्टट्युब बेबीका लागि पहिला श्रीमान्को वीर्यको जाँच गरेपछि सुक्रक्रिट छ कि छैन पत्ता लाग्छ । छ भने २० देखि ६० मिलियनबीच हुनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिर पनि समस्या हुनसक्छ । पुरुषले सुक्रकिट उत्पदान गर्न सकेन भने डोनर खोजिन्छ । महिलाको शरीरले अन्डा उत्पादन गरेको छैन या उत्पदान भए पनि पूर्ण क्षमताको छैन भने अन्य महिलाको अन्डा लिएर यो प्रक्रियमा जाने हो । यसभित्र दुई प्रकारका विधि छन् । महिलाहरूको शरीरले अण्डा उत्पादन गर्न सकेन भने दिदीबहिनी या साथीभाइको अण्डा लिन सिफारिस गरिन्छ । त्यो सिफासिर दम्पती आफैले दिने गरेका छन् । पुरुषको हकमा पनि यस्तै हुन्छ । प्रायः साथीभाइ र दाजुभाइ तथा आफन्तको लिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्था भएन भने हामीले इम्रियो बैङ्कको स्थापना गरेका छौँ । जहाँ पुरुषको सुक्रकिट सुरक्षति रूपमा राखिएको हुन्छ । जहाँ हामीले विभिन्न डोनरका स्वास्थ्य सुक्रकिट राखेका हुन्छौँ । यस्ता डोनरको शारीरक परीक्षण गरेर राखिन्छ । उनीहरूलाई एक पटकमा हामीले २ हजारदेखि ३ हजार रूपैयाँसम्म दिने गरेका छौँ । त्यो रकम अन्तत बिरामीको उपचारमा जोडिन्छ । वीर्यलाई हामीले सुरक्षित तरिकाले राख्ने गर्छांै । उनीहरूको जात, रङ आदिलाई मिल्ने खालको मिलाएर प्रक्रियामा जान्छौँ । तर त्यो गोप्य हुन्छ । ताकि कसको हो, कुन हो हामीले भन्न मिल्दैन । यदि आफै डोनर खोजेर ल्याएका छन् भने हामीले गोप्यता राखिदिने हो । उनीहरूले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्छन् ।
टेस्टट्युब बेबी प्रक्रिया के हो ?
नेपालमा पहिलो पटक २०६० सालमा टेस्टट्युब बेबी जन्मिएको थियो । जुन प्रविधि स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालले भित्र्याएका थिए । अहिले देशमा विभन्न अस्पालहरूमा यो सेवा सुरु भएको छ । यस सेवाबाट कति बच्चा जन्मिए भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क पाइँदैन । सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका आआफ्नै तथ्याङ्क छन् । नेपालमा टेस्टट्युब बेबी भनेर निकै प्रचलित छ । तर यसको खास नाम चाहिँ यो होइन ।
सबैभन्दा पहिले आमा र बाबुलाई इन्जेक्सन दिएर डिम्ब र शुक्रकिट निकालिन्छ । यसो गर्नुको कारण भनेको आमा र बाबुबाट बढीभन्दा बढी डिम्ब र शुक्रकिट निस्कियोस् भन्ने हो । त्यतिबेला बाबु र आमालाई अलिकति लठ्याइन्छ पनि । त्यसपछि नलीबाट डिम्ब र शुक्रकिट टेस्टट्युबमा निकालिन्छ । डिम्ब र शुक्रकिटलाई टेस्टट्युबमा दुई मिनेटभन्दा बढी समय राखिँदैन । यसमा प्रयोग गर्ने टेस्टट्युब खासमा बजारमा पाइने आकारकै हुन्छ तर प्रकृति भने अलि फरक हुन्छ । त्यसपछि डिम्ब र शुक्रकिटलाई इक्रिपेट पेट्रिडिस (सिसाको विशेष भाँडो)मा राखिन्छ । पेट्रिडिसमा ३६ घन्टासम्म राख्दा डिम्ब र शुक्रकिट फर्टायल आर्थात् सेचन हुन्छ । पेट्रिडिसमा भ्रुण बन्नका लागि योग्य वातावरण हुन्छ अर्थात् बच्चाको भु्रण बन्छ । त्यसरी सेचन भइसकेको भु्रणलाई पुनः आमाको गर्भाशयमा राखिन्छ, जसलाई एमरिओ ट्रान्सफर भनिन्छ । त्यसपछि अरू बच्चा जसरी जन्मिन्छन् त्यसरी नै टेस्टट्युब बेबी पनि जन्मन्छ । यसलाई अन्य महिलाको जस्तै डेलिभरीको प्रक्रियामा जान्छ ।
यी कारणले बच्चा नहुन सक्छन् ?
टेस्टट्युब बेबी कति सफल ?
विश्वमा टेस्टट्युब बेबी सुरुवात भएको २५ वर्षपछि नेपालमा सुरु भएको हो । अहिले अधिकांश ठूला सहरमा यो सेवा उपलब्ध छ । नेपालमा डा. भोला रिजालले यो सेवा सुरुवात गरेका हुन् । २०६० सालदेखि नेपालमा टेस्टट्युब बेबीको प्रचलन सुरु भएको हो । पहिलो पटक ओम हस्पिटलमा ओममणि तामाङ यो प्रविधिबाट जन्मिएका हुन् । अहिले नेपाल सरकारले समेत प्रसूति गृहमा यस्तो प्रविधिको सुरुवात गरिसकेको छ । जसले यसको व्यापकता वृद्धि गरेको छ । अरू कुनै पनि तरिकाबाट बच्चा भइरहेको छैन भने उनीहरूका लागि यो सेवा बरदान सावित हुन भएको छ । त्यसैले अब कोही पनि बच्चा भएन भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा जुलाई १० लाई निःसन्तान दिवसका रूपमा मनाउँछौँ । विश्वमा पहिलो पल्ट यस प्रक्रियाको प्रयोग बेलायतमा पैट्रिक स्टेपो र रबर्ट एडवर्डसले गरेका थिए । उनीहरूको यस प्रक्रियाले जन्मेको बच्चाको नाम लुइस ब्राउन थियो, जसको जन्म २५ जुलाई, १९७८ मा मेनचेस्टरमा भएको थियो ।